Latest News Archives - ILBC | IGCSE & A LEVEL SCHOOL
10 May,2022 ILBC
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အစီအစဉ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ကျောင်းပရဝုဏ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Technology Integrated Learning Programme ဖြင့် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်များသင်ကြားမှုကို Online ဖြင့်သင်ကြားပို့ချပြီး၊ …
3 Mar,2022 Web Developer
ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ၊ တူလေး / တူမလေးတွေကို Summer ကာလမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့ စုံစမ်းနေတဲ့သူတွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် ILBC TBL – EPC အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို မတ်လ ၁၈ရက် (သောကြာနေ့)မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ILBC Preschool Registration Open Now!
11 May,2021 Web Developer
ILBC Preschool Remote Learning Programme ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင်စ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်တွင် တက်ရောက်လိုသည့် ILBC Preschool ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ …
ILBC TIL Registration Open Now For New Students!!
၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ILBC Technology Integrated Learning (TIL) (IGCSE & A Level) အစီအစဥ်ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဇွန်လ ပထမအပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ တက်ရောက်လိုသည့် …
ILBC TIL Registration Open Now!!
၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၏ ILBC Technology Integrated Learning (TIL) အစီအစဥ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ပထမအပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ILBC ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ILBC …
Announcement for Coming 2021-2022 Academic Year (ILBC Technology Integrated Learning (TIL))
29 Apr,2021 Web Developer
ILBC ကျောင်းသူ/သားများ၊ မိဘများနှင့် အုပ်ထိန်းသူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း။ ILBC Technology Integrated Learning (TIL) IGCSE & A Level (2021 – 2022 Academic Year) —————————————————————— …
ILBC Technology Based Learning (TBL) – Weekend English Proficiency Course
28 Sep,2020 Web Developer
အင်္ဂလိပ်စာကို မိမိ‌ရောက်ရှိပြီးသည့် Level မှ စ၍သင်ယူလိုသည့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် “Technology Based Learning – TBL” အသုံးပြုပြီး “Weekend English Proficiency Course – EPC” …
ILBC Preschool Remote Learning Programme
ILBC ၏ “Preschool Remote Learning Programme” သည် (၁) ကလေးငယ်များအတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ယူလေ့ကျင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော စွမ်းရည်များ မမေ့ပျောက်သွားစေရန်၊ (၂) အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ယူလေ့ကျင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော စွမ်းရည်များ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ရန်၊ (၃) …
Congratulations Technology Integrated Learning (TIL)
23 Jul,2020 Web Developer
Congratulations Technology Integrated Learning (TIL)✨ Welcome Back to School ————————– ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ပညာသင်နှစ်အတွက် Technology Integrated Learning (TIL)ဖြင့်ပညာသင်ယူရန် ILBC ကျောင်းပရဝဏ်အတွင်းသို့ …
Congratulations Teachers & Students!!
Congratulations Teachers & Students!! Technology Integrated Learning (TIL) (IGCSE & A Level) —————————— ယနေ့ ဇူလိုင်လ (၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဆရာ/မများနှင့် Secondary …